Engineering Solar - Besca Industrial Co., Ltd.
Amandla olunikezwa ilanga. Ukusebenza olunikezwa Cooper B-Line.
Besca imiklamo silwenza odonsa phambili zindawo zokusesha ezethusayo welanga kanye nezixazululo obandayo Yezentengiselwano futhi Umfelandawonye Scale photovoltaic amaphrojekthi.? Izifaki nabanikazi phrojekthi sesincika solar zindawo zokusesha ezethusayo izixazululo zethu ukusiza:
Thuthukisa ukufakwa isikhathi
Esingafani Ukukhiqiza Umthamo
Nge abangaphezu kwesigidi izinyawo square yokukhiqiza lokungcolisa global, Besca njalo inikeza imikhiqizo izinga nganoma yisiphi usayizi iphrojekthi solar noma indawo.
Amasiko ethu emisha ushayela onjiniyela kanye nabasebenzi wethu ukwakha labor- eliyingqayizivele futhi zindawo zokusesha ezethusayo isikhathi osindisa futhi izinhlelo ukukhweza ezinikeza Kubiza aphansi kokuthenga.
Qedela Ukuhlukaniselana System
Besca is ehlukile isebangeni ukunikela umugqa egcwele izingxenye elingezayo komzamo ukuhlanganisa panel obandayo, ikhebula noma ngocingo ukuphathwa, ezivalekile, iziqobosho nokuningi Ukusiza ukukhulisa kahle nobuchwepheshe ngaphakathi iphrojekthi yakho elanga.